musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Waya Nhau Services » Akanakisa Mahedheni muNorth America: Sangana nema stylists
Iyo Professional Runako Association (PBA) iri kufara kuzivisa ivo vanokunda mu2021 North American Hairstyling Awards (NAHA), yemakwikwi indasitiri yerunako inonyanya kukwikwidza muNorth America. NAHA inokudza indasitiri yerunako vepamusoro maartist uye tarenda rekugadzira vanosundira iyo miganho yehunyanzvi uye kugona. Kwemakore anopfuura makumi matatu, zviuru zvevane tarenda maartist vakashandisa NAHA sepuratifomu yekuratidza basa ravo kuhwina NAHA inochiva.
Chiitiko chinokudzwa chakaitwa Mugovera, Nyamavhuvhu 29 paMandalay Bay Resort uye Convention Center panguva yeCosmoprof North America (CPNA) muLas Vegas., Nevada.
NAHA inopemberera tarenda rinotungamira indasitiri uye inoratidzira zvikamu gumi neshanu zvehunyanzvi pane bvudzi nemagadzirirwo ehunyanzvi, kusanganisira iyo nyowani Inokurudzira yeSalon yegore uye Mudzidzisi wegore zvikamu zvemubairo.
"Iri raive gore risati ramboitwa reNAHA, asi hunyanzvi hwakagadzirwa uye hunyanzvi hwakaratidzwa hwaive pakati pezvekunakidza munhoroondo yemakwikwi," anogovera Nina Mazuva ese, Executive Director wePBA. "Indasitiri iyi yakatsigira kushandisa simba mukuita hunyanzvi hwekudyidzana uye kushamwaridzana, uye hatina kukwanisa kuzvitutumadza kwevakakunda, vakapedzisa uye nemunhu wese akaisa shungu nesimba kuita kuti manheru ano kubudirire zvakadaro."
NAHA 2021 yakagamuchirwa neA-runyorwa mukurumbira stylist uye Living Proof Global Creative Director Michael Shaun Corby uye yakaratidza hunyanzvi mharidzo naSilas Tsang uye Ulta Runako Pro Chikwata. Chiitiko ichi chaive chichifambiswa uye chaivepo pane zvaidiwa kune avo vaisakwanisa kuenda pamunhu.
Kunze kwemhemberero dzemubairo, NAHA 2021 yaisanganisira yekugamuchira-tsvuku kapeti inogamuchira NAHA mafainari, vakambokunda NAHA, vatungamiriri vanokurudzira, uye vane mukurumbira kuchiratidziro, uye yakaitirwa neKutanga Media Partner Salon Yemazuva Ano naAnne Morattoalong pamwe neindasitiri icon, mudzidzisi, mugeri uye muratidziri Rodrick Samuels.
2021 NAHA Makomborero Vakundi:
Anobatsira Garde- Sharie Valcin
Edhisheni Stylist wegore- Danielle Keasling
Mudzidzisi wegore- Sam Villa
Bvudzi- Suzanne Sturm
Kucheka bvudzi- Stephen Moody
Hairstylist wegore- Silas Tsang
Inokurudzira Salon yeGore- Chikamu Ruvara Saloni + Spa
Makeup Artist wegore- Nohemi Capetillo
Master Hairstylist wegore- Ruth Roche
Varume Vanogadzira Hairstylist yeGore- Nieves Almaraz
Mudzidzi Hairstylist wegore- Alisha Kemp
Kugadzira uye Kupedza- Nick Stenson
Chikwata cheGore- Julie Vrie